Ama-shuttering Magnet Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Shuttering Magnet Factory
I-Magnetic Shuttering Profile System iyinhlanganisela esebenzayo yamagnet shuttering kanye nesikhunta sensimbi. Imvamisa ingasetshenziswa ngokuphathwa kwamarobhothi noma ukusebenza ngesandla.
Ama-Magnets wokuvala ama-1800KG anenkinobho yokuvula / yokuvala ye-Prefabricated Building Formwork System
I-1800KG Shuttering Magnet iyimagnet ejwayelekile yebhokisi yokulungisa isikhunta se-precast ekukhiqizeni ukhonkolo. Ngenxa enamandla kazibuthe womhlaba ongajwayelekile we-neodymium, ingabamba isikhunta etafuleni ngokuqinile. It is kabanzi steel formwork noma plywood isikhunta.
900KG, 1Ton Box Magnets For Precast Tilting Ithebula Isikhunta Ukulungisa
I-900KG Magnetic Shuttering Box uhlelo oludumile lukazibuthe lokukhiqiza udonga lwepaneli ye-precast, zombili isikhunta sohlangothi sokhuni nensimbi, esakhiwe ngegobolondo lebhokisi lekhabhoni kanye neqoqo le-neodymium magnetic system.
Uzibuthe wohlobo lwebhokisi le-450Kg usayizi omncane wesistimu kazibuthe yokulungisa i-sidemold etafuleni likakhonkolo le-precast. Ijwayele ukukhiqiza ipaneli ekhanyayo ye-precast ekhanyayo njengobukhulu be-30mm kuye ku-50mm.